Afobe tao Toliara: magazay iray ao Bazaribe kila hotohoto - ewa.mg
Afobe tao Toliara: magazay iray ao Bazaribe kila hotohoto
News - Afobe tao Toliara: magazay iray ao Bazaribe kila hotohoto
Nitrangana haintrano ma­hatsiravina
indray tao Toliara, omaly tamin’ny 10 ora atoandro. Raha ny
fampitam-baovao voaray, nivarotra maraina ny tompon’ity magazay ka
nody rehefa atoandro. Efa tany an-tranony izy no nahazo antso fa
may ny trano fivarotany satria hitan’ireo olona teo amin’ny
manodidina ny setroka maintibe nivoaka avy ao amin’ilay
tranombarotra. Fo­toana fohy taorian’ny firehetana, tonga teny
an-toerana ny mpamonjy voina avy ao amin’ny kaominina
ambonivohitr’i Toliara nanao ny asam-pamonjena tamin’ny famonoana
ny afo. Nanano sarotra ny afo satria naharitra adiny roa ny
famonoana izany vao maty tanteraka, raha ny fanazavana voaray
hatrany. Voafehy ihany anefa izany ka tsy niitatra tamin’ireo trano
fivarotana eo amin’ny manodidina. Tsy nisy noraisina fa kilan’ny
afo avokoa ny entam-barotra rehetra tao anatin’ilay magazay. Araka
ny fanazavan’ny eo anivon’ny mpamonjy voina kosa, naharenesana
tavoahangina gazy miisa enina nipoaka tao anatin’ity magazay ity.
Hatreto aloha, tsy mbola hay ny antony nahatonga ny firehetana.
L’article Afobe tao Toliara: magazay iray ao Bazaribe kila hotohoto a été récupéré chez Newsmada.
Bazaribe - Toliara
Nitrangana fanafihan-dahalo miaro vono olona tao amin’ny fokontany Ankijambe, kaominina Ambararatabe faritra Bongolava, ny alin’ny alahady teo. Voaroban’ireo andian-dahalo nirongo fitaovam-piadiana ny tokantrano iray tao an-toerana. Very tamin’izany ny vola vidin’omby an’ilay raim-pianakaviana.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Tsy tana ny ain’ny mpamily sy ny mpandeha iray tamin’ny fiara marika “Mercedes Sprinter Fourgon” niharan-doza tany Vohitranivona-Brickaville amin’ny lalam-pirenena faharoa, afak’ omaly. Nitondra mpandeha folo io fiara io avy any Ambohimahasoa raha nikasa ho any Savalaina saingy nidona tamin’ny hazo letisia lehibe iray talohan’ny nivoahany ny lalana. Ahiana ho vokatry ny torimaso fotsy nahazo ny mpamily no nahatonga ny loza, raha ny tombantomban’ireo zandary nidina ifotony nijery ny voina niseho. Naratra ny efatra tamin’ ireo mpandeha ary samy efa manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly any Brickaville. Nahitana fahapotehana lehibe tokoa ny fiara. L’article Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha roa namoy ny ainy nadonan’ny fiara tamin’ny hazo est apparu en premier sur AoRaha.
Tsiaro ny tantaram-pirenena: nijoro tao anatin’ny sarotra ny Kly Ratsimandrava
Na ahoana na ahoana, tsaroana isan-taona… 46 taona anio ny nandraisan’ny kolonely Ratsimandrava Richard ny fahefana feno hitondra ny tany sy ny fanjakana.Natolotry ny jeneraly Ramanantsoa Gabriel azy ny 5 febroary 1975 izany. Filoham-panjakana sady lehiben’ny governemanta izy tamin’izany, minisitry ny Fiarovam-pirenena sy ny teti-pivoarana. Nalaza ny valin-teniny hoe: “Tsy hiamboho adidy aho, mon général.” Tsaroana hatramin’izao…Fandraisana andraikitra tao anatin’ny fotoan-tsaroatra nolalovan’ny firenena izany fa tsy sanatria fitadiavan-toerana, ohatra. Ny tohin’ny fandraisany fahefana dia hoe: “Satria mitady olona handray andraikitra izao fotoan-tsarotra diavin’ny firenena izao. Ekeko antsakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao. Koa fisaorana ny atolotro anao amin’ireo tsodrano sy ny firarian-tsoa nataonao ho ahy sy ho an’ny governemanta tarihiko.”Tao anatin’ny fahasahiana sy ny fahatsorana…Fahasahiana sy fahavononana ny fandraisana andraikitra. Efa fantany mialoha fa sarotra ny toe-draharaham-pirenena, antony nanoloran’ny Jly Ramanantsoa fahefana azy. Teo, ohatra, ny hoe saika nisian’ny fanonganam-panjakana ara-miaramila, ny desambra 1973. Na ny fisian’ny tetika fanakorontana teo anivon’ny Tafika, ny fanahiana adim-poko…Tao anatin’ny fahatsorana sy ny fahitsiana koa izay fandraisana andraikitra izay. Voajoro tao anatin’ny andro vitsy, ohatra, ny governemanta notarihiny. Teny amin’ny minisiteran’ny Atitany, Anosy, ihany ny niasany na filoham-panjakana aza izy; eny, na efa nisy aza ny fijerena ny trano nisy ny mpanolotsaina faratampon’ny tolom-piavotana (CSR) teo aloha, Ambohidahy. Ny fiara Peugeot 404 miloko mainty amin’ny maha manamboninahitry ny Zandarimaria azy ihany no nampiasainy.Mby aiza ny ankehitriny amin’izany rehetra izany?R.Nd.L’article Tsiaro ny tantaram-pirenena: nijoro tao anatin’ny sarotra ny Kly Ratsimandrava a été récupéré chez Newsmada.
Filoha Rajoelina Andry: « Tsy maintsy tafaverina eto ilay volamena any ivelany »
Ankoatra ny resaka valanaretina, nitondra fanazavana sy ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena ny filoha Rajoelina Andry. “Tsy hanaiky isika fa tsy maintsy tafaverina eto ny volamena any ivelany. Na iza na iza nanao ireny tsy avelan’ny fitondram-panjakana ho afa-maina”, hoy izy. Miditra eo amin’ny fahatelovolany izao ity “Raharaha volamena 73,5kg” atsy Afrika Atsimo ity ary izao nanaovan’ny filoha fanamby izao.Vahaolan’ny mpianatra eny amin’ny oniversiteNitondrany vahaolana koa ny momba ny fitakian’ireo mpianatra ny vatsim-pianarana sy ny olana miverimberina. Natsidiny tamin’izany fa homena karatra eny anivon’ny banky “carte bancaire” ny mpianatra tsirairay ka tsy hiseho intsony ny fahatarana amin’ny fahazoan’izy ireo ny vatsim-pianarana. Notsiahiviny fa nahatafatsangana oniversite miisa fito tao anatin’ny roa taona nitondrana ny filoha Rajoelina.Tsy azo ekena ny korontanaEo amin’ny lafiny politika indray kosa, nitodika amin’ny mpanohitra ny tenany ka nilazany ny amin’ny tokony hanajana ny rafitra demokratika. “Tsy azo ekena ny hisehoan’ny korontana eto izany. Tsy ilaina intsony ny hazalambo toy ny nitranga tamin’ny 2002. Ny mpitandro filaminana miaro vahoaka sy miaro ny demokrasia. Tsy mila korontana intsony ny Malagasy”, hoy ihany izy.Ankoatra izany, hozaraina tany sy ny fitaovana hanaovany trano, omena ondry aman’osy ireo tratran’ ny kere any atsimon’ny Nosy…Barea sy ny vaksinin’ny covid-19Tsy nohadinoiny ny niresaka sy nitondra ny heviny ny momba ny ekipam-pirenena, Barea. Nanofa Airbus 320 hitondra ny mpilalao hiatrika ny fihaonana amin’i Etiopia amin’ny fifanintsanan’ny Can ny fanjakana, araka ny nambarany.Etsy an-daniny, nambarany fa tsy mieritreritra ny hanao vaksiny ary tsy mbola nanao vaksiny ny filoha Rajoelina. “Ampy sy mahasitrana ny CVO +. Tsy mbola manohitra ny vaksiny isika fa mbola mijery ny fivoarany. Ry zareo mpanohitra no atao vaksiny voalohany raha vao tonga izany”, hoy izy.Synèse R.L’article Filoha Rajoelina Andry: « Tsy maintsy tafaverina eto ilay volamena any ivelany » a été récupéré chez Newsmada.